musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Etiopiya Airlines inotangisa basa reMarseille
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Ethiopia Kupwanya Nhau • France Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Etiopiya Airlines yakatanga nendege katatu pasvondo kuenda kuMarseille, France musi wa 2 Chikunguru 2019. Basa idzva iri rakavhurwa pachiitiko chine mavara chakaitirwa muVIP Salon paAddis Ababa International Airport pamberi paHE Mr. Frédéric Bontems, Mumiriri weFrance Anoshamisa uye Plenipotentiary ku Ethiopia naVaTewolde GebreMariam, mukuru weEthiopia Group CEO, vese vari vaviri vaive munzira yekutanga.
Nhengo dzenzvimbo yemumiriri muAddis Ababa pamwechete nevamwe vakokwa vakakoka chiitiko ichi. Keke rekucheka uye champagne toast mhemberero yakaitirwa kuratidza chiitiko.
Marseille, guta rechipiri pakukura muFrance, ndiyo nzvimbo yechipiri kuFrance uye 20 kuenda kuEurope.
Nendege nyowani iyi, Ethiopia ikozvino inoshanda vanopfuura makumi matanhatu ndege dzevapfuuri kuenda kumaguta eEurope vhiki rega
Etiopiya Airlines yanga ichibhururuka ichienda kuParis kubvira 1971 ichibatanidza Africa neguta reFrance kweanoda kusvika makumi mashanu emakore nokudaro ichirerutsa kudyara kwekutengeserana, kushanya uye hukama hwevanhu nevanhu.
Parizvino, Ethiopia inobhururuka ichienda kunzvimbo dzinopfuura zana nemakumi matanhatu dzenyika dzese kumakondinendi mashanu.